Ny tantaran'ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fampanantenan'ny tsy fahafatesana dia voasoratra ao amin'ny Zodiaka. Ny iray hamaky izany dia tsy maintsy mandalina ny fiainana ao am-bohoka ary hanaraka ny fivoarany amin'ny alàlan'ny ambiansy sy ny hetaheta mandritra ny fandehanana an'izao tontolo izao.
Vol. 3 APRIL, 1906. Tsia
REHEFA vanim-potoana niainantsika, dia nisy olona hendry namaky ny tantaran'ny famoronana ny zava-drehetra ao amin'ny zodiak, satria tao no tsy voafehina sy noraketina an-tsoratra izany - izany no tena be mpampiasa sy tsy manavakavaka ny mpahay tantara.
Tamin'ny alàlan'ny zavatra niainana maro sy niverimberina momba ny kodiarana averina eto an-tany, dia nanjary hendry ny lehilahy; fantatr'izy ireo fa ny vatan'ny olona dia misy dikanteny roa amin'ny tontolo lehibe; namaky ny tantaran'ny famoronana an'izao tontolo izao izy ireo satria naverina indray teo amin'ny fototarazo iraisan'ny olombelona tsirairay; nianatra izy ireo fa ny zodiak any an-danitra dia tsy afaka ny ho takatry ny saina sy ny adika amin'ny alàlan'ny fahazavan'ilay zodiac ao amin'ny vatana; nianatra izy ireo fa ny ain'olombelona dia avy amin'ny tsy fantatra ary mandry ary manonofy ho any amin'ny fantatra; ary tsy maintsy mifoha io ary mizotra tsy ho lasa saina raha tsy hahavita ny lalan'ny zodiaka.
Ny hoe Zodiak dia midika hoe "faribolana biby," na "faribolana." Ny zodiaka dia asehon'ny astronomia ho toy ny fehikibo, zona, na faribolana masina, mizara ho antokon-kintana roa ambin'ny folo na famantarana. Ny anton-kintana na mari-pamantarana dia telo ambin'ny folo degre, ny roa ambin'ny folo miara-manao ny faribolana manontolo misy enim-polo amby telon-jato. Ao anatin'ity faribolana ity na zodiakà dia misy ny lalan'ny masoandro, ny volana ary ny planeta. Antsoina hoe Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, ary Pisces. Ny mariky ny antokon-kintana dia ♈︎ ♈︎, ♊︎, ♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎, ♏︎, ♐︎, ♑︎, ♒︎, ♓︎. Ny zodiaka na faribolana iray dia voalaza fa hahitatra hatramin'ny valo ambiny eo amin'ny lafiny tsirairay amin'ny ekoatera. Ny famantarana avaratra dia (na mihoatra ny 2,100 XNUMX taona lasa izay) ♈︎ ♉︎, ♊︎, ♋︎, ♌︎, ♍︎. Ny famantarana atsimo dia ♎︎, ♏︎, ♐︎, ♑︎, ♒︎, ♓︎.
Raha tazomina ao an-tsainan'ny olona sy natolony azy ireo tamin'ny fomba nentim-paharazana dia tsy maintsy nisy fiantraikany azo ampiharina amin'ny fiainany ny zodiak. Ny zodiak no mpitari-dàlana ny olona rehetra primitité. Ny teti-piainan'izy ireo dia ny tetiandro tokana hitari-dalana azy ireo amin'ny asa fambolena sy ny toe-karena hafa. Raha samy niseho tamin'ny faritra sasany tany an-danitra ny tsirairay amin'ireo antokon-kintana roa ambin'ny folo, dia fantatr'izy ireo fa mariky ny vanim-potoana iray ary izy ireo nitantana ny fihetsik'izy ireo ary nanatrika ny asa sy ny andraikitra ilaina amin'ny vanim-potoana.
Ny antony manosika sy foto-kevitry ny fiainana maoderina dia tsy mitovy amin'ny an'ny taloha fa sarotra ho an'ny lehilahy ankehitriny ny mankasitraka ny asa ara-indostrialy sy matihanina, ny tokantrano ary ny fiainana ara-pivavahan'ny olona taloha. Ny famakiana ny tantara sy ny angano dia mampiseho ny fahalianana tian'ny olona tamin'ny vanim-potoana tamin'ny zava-mitranga voajanahary rehetra, ary indrindra ireo trangan-javatra amin'ny lanitra. Ankoatra ny dikany ara-batana, misy dikany maro azo raisina amin'ny angano sy famantarana tsirairay. Ny hevitry ny antokon-kintana vitsivitsy dia nomena ao amin'ny boky. Ireo haino aman-jery ireo dia hiezaka hanondro ny dikan'ireo dikany maro hafa amin'ny zodiaka — satria mifandraika amin'ny olona izany. Ity fampiharana manaraka ity dia azo jerena amin'ny alàlan'ny asan'ireo izay nanoratra momba ny lohahevitra.
Rehefa nandalo ny equinox vernal ny masoandro dia nahafantatra ny fiandohan'ny lohataona. Ary ny nantsoiny hoe io no voalohany, ary ny anarany hoe "Aries", ilay ondrilahy satria vanin'andro zanak'ondry na ondrilahy io.
Ny antokon-kintana manaraka, ary teo no nahavitan'ny masoandro ny diany, dia nisaina sy nantsoina indray mandeha ny anarany.
Rehefa niditra tamin'ny antokom-baravarana faharoa ny masoandro, dia fantatr'izy ireo fa fotoana izao izy ireo hiasa ny tany, izay nataon'izy ireo tamin'ny omby, ary toy ny volana izay nahaterahan'ireo zanak'omby, dia nantsoin'izy ireo hoe antokon-teny hoe "Taurus," ilay omby.
Nihanafana ny andro raha vao nafana ny andro; nihinana ny vorona sy ny biby; ny sain'ny tanora dia nitodika tany amin'ny eritreritra feno fitiavana; lasa tia fientanentana ny mpitia, namorona andinin-tsoratra ary milanjaka ny tanany eny an-tsaha maitso eny anelanelan'ny voninkazo. ary noho izany ny antontan-taratasy fahatelo nantsoina hoe "Gemini", ny kambana na ny mpitia.
Nitombo ny andro raha tsy mitsaha-mitombo ny masoandro any an-danitra, mandra-pahatongany ho any amin'ny teboka avo indrindra amin'ny diany, rehefa niampita ny solstice fahavaratra izy ary niditra ny antokon'ny fahefatra na famantarana ny zodiaka, taorian'izay dia nihena ny andro raha nanomboka ny lamosina nihemotra ny masoandro. Noho ny fihetsiky ny masoandro manjelatra sy miverina, ny famantarana dia antsoina hoe "Kankerita", ny foza, na lobster, izay antsoina koa satria ny fihetsiky ny tara-mena misy ny foza dia nitantara ny fihetsehan'ny masoandro taorian'ny nanolorany an'io famantarana io.
Nitombo ny hafanan'ny fahavaratra rehefa nanohy ny diany tamin'ny marika fahadimy na konstelika fahadimy ny masoandro. Maina matetika ny renirano any anaty ala ary ny bibidia dia niditra matetika tao an-tanàna mba hitady rano. Io famantarana io dia nantsoina hoe "Leo," liona, satria ny feon'ny liona dia henoina matetika amin'ny alina, ary koa satria ny hafanana sy ny tanjaky ny liona dia toa ny hafanana sy ny herin'ny masoandro amin'izao vanim-potoana izao.
Nivoatra tsara ny fahavaratra rehefa tany amin'ny famantarana fahenina na fironana tokana ny masoandro. Avy eo, nanomboka ny masom-bary sy ny varimbazaha naniry tany an-tsaha, ary tahaka ny fanaon'ny zazavavy manangona ireo amboara, ny famantarana fahenina na antokon-kintana dia nantsoina hoe "Virgo", ilay virjiny.
Tonga eo akaikin'ny fararano ny fahavaratra ary rehefa nita ny tsipika ny masoandro tamin'ny equinox fararano dia nisy fifandanjana tonga lafatra teo anelanelan'ny andro sy alina. Io famantarana io, noho izany, dia nantsoina hoe "Libra", na mizana, na mizana.
Tamin'ny fotoana nidiran'ny masoandro ny antokom-pivoriana fahavalo fahavalo dia toa manaikitra ny kankana ary mahatonga ny zavamaniry ho faty sy ho simba, ary, miaraka amin'ny rivotra poizina avy amin'ny faritra sasany dia hiparitaka aretina; koa ny famantarana fahavalo dia nantsoina hoe "Scorpio", ny asp, dragona, na maingoka.
Ireo hazo dia nolavina tamin'ny raviny ary ny fiainana legioma no lasa. Avy eo, rehefa niditra ny antokom-pivoriana fahasivy ny masoandro dia nanomboka ny fihazana, ary io famantarana io dia nantsoina hoe "Sagittarius", ilay mpandefa zana-tsipìka, centaur, tsipìka ary zana-tsipìka.
Tamin'ny fotoan'ny solomaso ny ririnina dia niditra tao amin'ny antokom-pivoriana fahafolo ny masoandro ary nanambara fa efa mahatratra ny teboka ambany indrindra amin'ny diany lehibe indrindra izy, ary rehefa afaka telo andro dia nanomboka nihamaina ny andro. Avy eo ny masoandro dia nanomboka ny diany avaratra tamin'ny fihetsiketsehana nandroso, ary ny famantarana fahafolo dia nantsoina hoe "Capricorn," ilay osilahy, satria raha niandry osilahy nanohy ny tendrombohitra tamin'ny lalana miolikolika izy ireo, izay mifanitsy indrindra amin'ny fihetsehana amin'ny alalàn'ny masoandro.
Rehefa nandeha ny masoandro tamin'ny antokona iraika ambin'ny folo, matetika dia avy ny oram-be sy ny oram-be, dia niempo ny snows ary matetika no nahatonga loza, ka ny famantarana iraika ambin'ny folo dia nantsoina hoe "Aquarius", ilay olona-rano, na famantarana ny rano.
Miaraka amin'ny fiposahan'ny masoandro ao amin'ny antokom-piraisana faharoa ambin'ny folo, dia nihena ny ranomandry tao amin'ny ony. Nanomboka ny vanin-trondro, ary noho izany dia famantarana ny zodiaka faharoa ambin'ny folo ny antsoina hoe "Pisces," ireo trondro.
Ka ny zodiaka misy famantarana roa na antokon-kintana roa dia nateraky ny taranaka mifandimby, ny famantarana tsirairay dia toa hiseho eo alohany ao anatin'ny vanim-potoana 2,155 taona. Ity fiovana ity dia noho ny filentehan'ny masoandro, segondra vitsy ao anatin'ny taona 365 1-4 andro, izay fotoana takiana azy hamakivaky ireo famantarana roa ambin'ny folo, ary ny fihemorana maharitra hatrany dia nahatonga azy tao anatin'ny 25,868 taona niseho tao anatin'ny 25,868 taona marika fa efa XNUMX XNUMX talohan'izay izy. Ity vanim-potoana lehibe ity - antsoina hoe taom-pialan-tsasatra - dia noho ny fiandohan'ireo ekoatera, rehefa nitodika indray mandeha ny tendron'ny ekoatera ary manodidina ny tsangam-panoherana.
Saingy na ny famantarana tsirairay dia toa nanova ny toerany ho an'ilay iray teo alohany tao anatin'ny 2,155 taona, dia hitohy hatrany ny hevitra mitovy amin'ireo famantarana tsirairay voalaza etsy ambony. Ny hazakazaka any amin'ny faritra tropikaly dia manana famantarana mifanentana amin'ny fotoany, fa eo amin'ny olona rehetra kosa dia hanjaka ny hevitra mitovy. Hitantsika izany amin'ny fotoan'androntsika. Efa maty tao anaty pisety ny masoandro, maherin'ny 2,155 taona, tsingerin'ny mesianika, ary mandalo ao anaty aqualie, nefa mbola miresaka momba ny aries ho famantarana ny equinox vernal.
Ity no fototry ny ara-batana ho an'ny famantarana ny zodiaka antsoina hoe izy ireo. Tsy hafahafa toy ny tamin'ny voalohany, fa ny hevitra mitovy momba ny zodiaka dia tokony hanjaka amin'ny olona tafasaraka sy amin'ny fotoana rehetra, satria lalan'ny natiora izany ary, araka ny efa naseho, ny zodiaka dia toy ny alimanaka iray hitari-dalana. ny olona amin'ny fitrandrahana azy, tahaka ny anjarany ankehitriny hitari-dalana antsika amin'ny fanaovana ny tetiandro ataontsika. Saingy misy antony maro hafa hitandremany ny hevitra mitovy amin'ireo hazakazaka samihafa, momba ny antokon-kintana, izay mety hitranga amin'ny sasany fa fanangonana famantarana tsy misy dikany sy tsy misy dikany.
Hatramin'ny vanim-potoana tany am-boalohany dia nisy lehilahy hendry vitsivitsy izay tonga amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, sy ny fahendrena ary ny hery, tamin'ny fomba sy fomba tsy fantatra matetika na mora narahana. Ireo lehilahy masina ireo, izay nalaina avy tamin'ny firenena sy ny firazanana rehetra, nitambatra ho firaisambe iraisana; ny tanjon'ny mpirahalahy dia miasa ho an'ny tombontsoan'ny rahalahiny. Ireo no "Masters," "Mahatmas," na "Loholona Brothers," izay lazain'i Madame Blavatsky ao amin'ny "Sekretera miafina", ary avy aminy, dia izy no nahazo ny fampianarana ao anatin'ity boky mahavariana ity. Io fiadanan'ny fiadanan'ny lehilahy hendry dia tsy fantatry izao tontolo izao amin'ny ankapobeny. Nisafidy tamin'ny hazakazaka tsirairay izy ireo, toy ny mpianatry ny tenany, toy ny antom-batana, ara-tsaina ary ara-pitondran-tena mba hahazo torolalana.
Noho ny fahafantarana ny fahafahan'ny olona ao anatin'ny vanim-potoana dia mahay ny fahatokisan'ny olon-kendry ireo olon-kendry ireo, toy ny iraka sy mpampianatra ny olona izay nanirahany azy ireo, hanome ny olona ny fanazavana momba ny zodiaka izay hanampy indroa tanjona hamaliana ny filan'izy ireo sy mandritra izany fotoana izany hitahiry ny anarana sy ny tandindon'ny famantarana. Ny fampianarana okika sy ny fampianarana anatiny dia natokana ho an'ny olom-bitsy izay vonona handray izany.
Ny hasarobidin'ny olona mitahiry ny fahalalana ny famantarana ny zodiak amin'ny alàlan'ny dingana rehetra momba ny fampandrosoana ara-poko dia mandainga fa ny famantarana tsirairay dia tsy ny manondro azy ary mifanandrify amin'ny ampahan'ny vatan'olombelona, ​​fa noho ny antokon-kintana, toy ny vondrona ny kintana, dia ivon'ny asan'ny maizina amin'ny vatana; satria ireo antokon-kintana dia mitovy amin'ny endrika sy fiasa. Ankoatr'izay, ilaina ny mitahiry ny fahalalana ny zodiak ao an-tsain'ny vahoaka satria ny rehetra dia tsy maintsy ao anatin'ny fandrosoana mba hahalala ireo fahamarinana ireo, izay samy, rehefa vonona, dia hahita ny fanampiana ilaina ary eo am-pelatanan'ny zodiak.
Andao hodinihintsika izao ireo biby na zavatra ary ireo mariky ny zodiaka, miaraka amin'ireo tapany ara-batana izay anendrena ireo famantarana sy famantarana.
Aries, ilay ondrilahy, dia ilay biby notendrena ho lohany satria ilay biby no nampiasain'ny lohany; satria ny famantarana ny tandroky ny ondrilahy, izay tandindon'ny mariazy, dia ny endrika namboarin'ny orona sy ny maso eo amin'ny tavan'ny olombelona rehetra; ary satria ny mariky ny aries dia mijoro amin'ny antsasaky ny faribolana na hemispheres ao amin'ny atidoha, nohazonin'ny tsipika miforitra, na, tsipika maharitra izay mizara avy any ambony sy mivezivezy midina, ary izany dia midika fa misondrotra ny hery ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ireo pons ary medulla oblongata amin'ny karandoha ary hiverina hamerina ny vatana.
Ny omby dia nomena ny tendany sy ny tendany satria ny tanjaky ny biby lehibe amin'ny tendany; satria ny angovo mamorona dia mifandray akaiky amin'ny tenda, satria ny tandroka roa amin'ny omby dia maneho ny lalana midina sy ambony miakatra ary ny roa ao amin'ny vatana, rehefa nidina avy any an-damosina ho any an-doha izy ireo.
Ny kambana, na ny tiana dia nasehon'ny almanaka sy ny alimanaka samihafa dia nitahiry ny hevitry ny mpanohitra roa, ny lafy tsaran-toetra sy ny toetra ratsy, na dia samy hafa aza izy roa, dia samy tsy mitovy saranga sy miray tokana. Natao tamin'ny sandry izy io satria, rehefa namoritra, ny sandry sy ny soroka no namorona ny famantarana gemini, ♊︎; satria mifamihina ny mpitia; ary satria ny sandry havanana sy havia sy tanana dia ilay tsato-by mihetsika mahery vaika sy mahomby indrindra amin'ny vatana ary koa taova mihetsika sy fanatanterahana.
Ny crab, na lobster, dia voafidy hisolo ny tratrany sy ny thorax satria ny ampahany ao amin'ny vatana dia ahitana ny havokavony izay misy ny fihetsiky ny foza sy mandroso; satria ny tongotry ny foza dia tsara indrindra ilazana ny taolan-tehezana; ary satria ny homamiadana, ♋︎, amin'ny marika dia nanondro ny nono roa sy ny reniny roa, ary koa ny fon'ny fihetseham-po sy ny magnetika.
Ny liona dia nalaina ho solontenan'ny fo satria io biby io izay voafidy amin'ny ankapobeny dia maneho ny herimpo, ny tanjaka, ny herim-batana ary ny toetra hafa tsy mihetsika ao am-po; ary satria ny mariky ny feo, ♌︎, dia mivelatra amin'ny vatana ny sternum misy taolan-damosina havanana sy havia amin'ny lafiny roa, manoloana ny fo.
Noho ny toetra mahavelom-bolo sy fananahana ny vehivavy, virgo, ny virjiny dia voafantina hisolo tena an ’io vatana io; miaro ny voan'ny fiainana; ary satria mariky ny virgo, ♍︎, dia mariky ny materim-jazakely ihany koa.
Libra, ♎︎, na mizana na mizana dia nofidina mba hampisehoana ny fizarazarana ny vatan'ny vatana; ny fanavahana ny vatana tsirairay na lahy na vavy, ary mba hanehoana an'i virgo sy scorpio na ny taovam-pananahana.
Ny scorpio, ♏︎, ny maingoka na asp, dia maneho ny marika masculine ho hery sy tandindona.
Ireo famantarana famantarana sagittary, capricorn, aquarius, pisces, izay mijoro amin'ny feny, ny lohalika, ny tongotra ary ny tongotra, toy izany, dia tsy maneho ny zodiak boribory na occult izay fikasanay hiatrehana izany. Noho izany dia avela ho an'ny editorial aorian'izay izay haseho azy ny hoe ny zodiak dia ny famoronana an'izao tontolo izao izay ametrahana ny fahefam-panjakana sy ny fitsipi-pifehezana sy ny fomba amin'ny alàlan'ny fihetsika izay mamindra ireo fitsipika ireo amin'ny vatana, sy amin'ny fananganana vaovao. vatana na embryon'ny olombelona, ​​ara-batana ary ara-panahy.